शासक होइन, शासन परिवर्तन
शाश्वत शर्मा– –
अव समय आयो, शासक परिवर्तनको । जनता सडकमा निस्किन थाले ।
राजतन्त्र समर्थकहरुको स्वतःस्फूर्त ¥याली ठाउँ ठाउँमा सुरु हुन थालिसकेपछि, राष्ट्रद्रोहीहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ । डा.बबुराम नाम भए पनि आम नेपालीले भारुराम भनेर चिन्ने एक राष्ट्रद्रोहीले गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गू नखाऔं भनेर राजतन्त्रको समर्थनमा निस्केको ¥यालीमा उपस्थित युवाहरुलाई त्याबता भड्काउन खोजेका छन् । त्यो त, त्यस्ता भारुरामहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो ¥याली, जुलुस वा आन्दोलन तिनले हिजोका दिनमा गरेकोजस्तो प्रायोजित हुँदै होइन । यहाँ न भारु, न त डलर केही पनि बगाइएको छैन । आजित भएपछि जनताले राजा खोजेका हुन्, सहारा खोजेका हुन् । हिजो गल्ती गरेकाहरुले सच्चिन खोजेका हुन् ।
नेपालीले चिन्ने शुझ्ने मुलुकहरु बेलायत, स्पेन, थाइलेण्ड सबैमा त्यहाँका जनताले राजतन्त्र पुर्नस्थापित गरेको इतिहास छ । त्यही इतिहास अव नेपालमा पनि दोहारिदैछ । यसमा भारुराम एण्ड कम्पनीहरुले जति कोकोहोलो मच्चाए पनि अव राष्ट्रभक्त नेपालीहरुले चूप बस्नेवाला छैनन् । अहिले शान्तपूर्वक जुलुस निस्किदा यस्तो र यसरी काँप्छन् यिनीहरु, भोलिका दिनमा जब राजतन्त्र बिधिवत रुपमा स्थापित भएर न्याय अन्याय छुट्याउन थाल्छ, तव यिनीहरुले के गर्लान् ? जनता आँधी हुन् भन्ने यिनले बुझेका छन्, आँधी चल्न थालिसक्यो ।
त्यसो त, एकजना महानुभावले चाँडष्ै नै पूर्व राजाको भारततिर धार्मिक भ्रमण हुने जनाउ दिएका छन् । यदि यो भ्रमण सुरु भयो भने यहाँ अरु कत्तिको छटपटाहट देखिने हो । हिजोसम्म जसको बुई चढेर सिंहदरवार कब्जा गरिएको थियो, त्यो अव नेपालीको झुकाव राजतन्त्ततिर भएपछि त्यतैतिर त्यो शक्ति पनि जान्छ नै । त्यसपछि यिनीहरु त रानो बिनाको माहुरीझैं हुनपुग्नेछन् । किनभने यिनको जनतामा पहुँच नै छैन । अनि जनतालाई यिनीहरु प्रति विश्वास नै छैन । करीव १५ वर्ष हेरे जनताले । उपलव्धि शून्य । सधैँ आफू आफूमै झैझगडा, अल्पमतको सरकारले काम गर्न सकेन भनेर दुई तिहाइ पनि दिए जनताले तर नतिजा झन बिकराल निस्कियो । महामारी यतिबिघ्न बढेको छ, सरकार र सत्तारुढ पार्टीको ध्यान सरकार र पार्टी कब्जा गर्नेतिर केन्द्रित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको कहालीलाग्दो भ्रष्टाचारको मूलजड राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई इंगित गरिदिएको छ । यति लाजमर्दो अवस्था अहिले विद्यमान छ । यस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा पनि प्रधानमनत्ती ओली सप्रमाण सफाइ दिन सक्दैनन् । त्यस्तो आरोपको बिधिवत रुपमा खण्डन गर्न सक्दैनन् । अझे कतिलाई लाग्दो हो, ओली भ्रष्ट भए राष्ट्रघाती भए, अव त्यही पार्टीबाट अर्को कोहीलाई मौका दिउँ न । केही गरि पो हाल्छ कि ? होइन, अव सरकार परिवर्तन गरेर केही हुनेवाला छैन । गणतन्त्र स्थापनापछिका सरकार र सरकार प्रमुखहरु सबैलाई बेहो¥यौं । समस्या व्यक्तिमा मात्रै होइन कि समस्या शासन प्रणालीमा नै छ । एकातिर विदेशीको आशीर्वादबाट सिंहदरवार पुगे । दोस्रो यिनमा रहेको भ्रष्ट प्रवृत्ति । कहाँबाट हुनछ नेपाल र नेपालीको कल्याण ? विदेशी राजदूतले हैकम जमाउने मुलुकको के अवस्था होला ? कहिले दक्षिणत त कहिले उत्तर, कहिले पश्चिमा । फेरि पनि भनौं कि यो शासन प्रणाली नै नेपाल सुहाउँदो भएन । पार्टीहरुलाई मात्र स्थान दिइयो । बहुसंख्यक नेपालीहरु विश्वास गरेको र नेपाल निर्माता राजतन्त्रलाई संविधानमा पन्छाएर नेपालमा कुनै पनि शासन चल्न सक्दैन । नतिजा त उही भद्रगोल हुनपुग्यो । संविधानको पालक, जनताको अभिभावक भनिएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्रीको मात्र पालक र अभिभावक भएर बसेकी छिन् । उता प्रधानमन्त्री चाहिँ नेकपाभित्र पनि आफ्नो मण्डलीको मात्र मालिक भएका छन् । आफ्नाहरुले जस्तो अपराध गरे पनि सात खुन माफ गर्ने मात्रै होइन कि अझ पुरस्कृत गर्छन् । बालुवाटारको जग्गा काण्डका दोषीहरु मध्येका विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लगाएर पुरस्कृत गरेका छन् । संविधान नियम कानुनलाई धोती लगाएका छन् । स्थानीय तहमा करोडौं हिनामिना भएका छन्, सिंहदरवारमा खरवौं, कतै छानबिन नै हुँदैन । जनताले पाउने आश्वासनमात्रै, अव जनताले सहनेवाला छैनन् । जतिसुकै संविधान बिरोधी जुलुसमाथि कारवाही गर्न सुरक्षा निकायलाई हार गुहार गरे पनि, ¥याली नियन्त्रण गर्न गोप्य मन्त्रणा गरे पनि, यो जनताको आन्दोलन रोकिनेवाला देखिदैन । स्मरणीय कुरा के छ भने संविधानले दिएको नागरिक हकको प्रयोग जनताले गरिरहेका छन् । जनताले शासन प्रणाली भएन भनेर फेर्न खोजेका मात्र हुन् । जनताको आन्दोलनमा हिंसा छँदैछैन । वर्तमान सत्ताधारीले समयमै बुझ्दा उचित हुनेछ । परिवर्तन त अव हुन्छ हुन्छ । भोलिका दिनमा यिनले १५ वर्षमा मच्चाएका लूटको छानबिन पनि हुनेछ । कडाभन्दा कडा कारवाही पनि पक्कै हुन्छ । आउने दिन भ्रष्टाचारीका लागि सुखद हुनेछैन । शक्तिशाली न्यायिक छानबिन आयोग बन्नेछ, त्यो आयोगले कसैलाई पनि छुट दिने छैन । जनताको जागरुकतालाई व्यक्ति परिवर्तन गरेर अल्झाउन, रोक्न खोज्नु निरर्थक हुनेछ । चेतना रहोस्, यसपटक जनताले आफ्नै बाहुबलले आफैले चाहेजस्तो परिवर्तन ल्याउने छन् ।